Nyochaa nke iPhone SE, sentimita anọ dị ike nke Apple | Akụkọ akụrụngwa
O yiri ka sentimita anọ ahụ achọghị ịpụ n'ụdị, ma ọ dịkarịa ala ma Apple kpebiri. Ma ọ bụ na March 21 ngosipụta nke ndị iPhone Ghaat, ngwaọrụ amachibidoro, nke ihe taa ewere dị ka "obere", yana atụmatụ ama ama nke iPhone 5s mana esonyere ya na teknụzụ kachasị ọhụrụ etinyere na ekwentị smart nke Apple nwere dị n'ahịa, ya bụ, ahụ nke iPhone 5s, mkpụrụ obi nke iPhone 6s. Na Akụrụngwa Actualidad anyị achọghị ka ị hapụ ihe ọ bụla nke teknụzụ ọhụụ nke a na-ebupụta n'ahịa, ọ bụ ya mere Anyị na-ewetara gị nyocha nke iPhone SE, dị ọnụ ala karịa iPhone nke Apple gosipụtara.
Apple efunahụla ahịa ahịa ya, yana dịka ọ na-eme na ngwaọrụ ọ bụla, iPhone SE nwekwara akara mkpado nke ya, nke oge a na-agụ 'Olee nnukwu ibu, obere… ». Oge a ka anyị ga-enyocha iPhone SE na mbipụta Rose Gold, ebe ọ bụ na ruo ugbu a ọ bụ agba na-agbasabeghị na chassis 5s iPhone, anyị ga-ekwukwa na ọ dị mma maka ndị hụrụ ụdị agba pastel a na-enwu gbaa. Maka ndị ka na-ala azụ iburu nnukwu ngebichi anyị na-eji na akpa ha, iPhone SE na-aghọ ọnụ maka ịtụle, n'ihi ọnụahịa na ike, ebe ọ bụ na dị ka anyị kwuru, ngwaọrụ ahụ dị ọnụ ala karịa ụlọ ọrụ Cupertino.
1 Ihe atumatu nke diri anyi kemgbe 2012
2 Anụ ọhịa wolf na-eyi akwa atụrụ, ihe na-egosi pointer
3 Sọftụwia kachasị ọhụrụ, yana atụmatụ niile akwadoro
4 Igwefoto dị na elu nke kachasị mma
5 Ọdịnaya nke igbe, ahịa na nnweta
Ihe atumatu nke diri anyi kemgbe 2012
Ọ bụ nhazi nke ghọrọ ma ihe na-adịghị mma ma ebe dị mma dabere na onye na otu ị si ele ya. Nye ọtụtụ, eziokwu nke iji ụdị ihe eji eme ihe n'afọ 2012 bụ ihe mmịfe n'akụkụ Apple, site na nke a na-atụ anya ọganiru ọ bụla rue ngalaba ngalaba a. Otú ọ dị, maka ọtụtụ ndị ọ bụ ihe ịga nke ọma imewe ka ụbọchị nke Apple jirila na ekwentị, nke doro anya na ndị ọrụ hụrụ ụdị atụmatụ a n'anya nke ukwuu. N'aka nke ọzọ, imeghachi ihe eji emebe ahụ emeela ka ụlọ ọrụ belata ụgwọ, eziokwu nke egosiputala nke ọma na ọnụahịa nke ngwaọrụ ahụ, nke abụghị naanị dị ọnụ ala karịa ugbu a, mana ọ bụkwa otu n'ime oke ala nke uru ha na-ewetara ụlọ ọrụ.
Na ogologo nke 12,38 cm, tinyere obosara nke 5,86 cm na ọkpụrụkpụ nke 0,76mm, kpọmkwem otu nha dị ka aha ya, iPhone 5s, ọ bụ ezie na ibu dịtụ gbanwere, na ohere a 113 grams, a gram n'elu iPhone 5s, nlereanya nke ọ na-agbaziri dum imewe. Obere mgbanwe na ọkwa nhazi dịka ntinye nke nomenclature "SE" n'okpuru akara "iPhone" fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ dịghị ihe ọ bụla. Anyị nwere ike ịkwụsị ngalaba a site na ịsị na iPhone SE bụ nnoo iPhone 5s ruo na mputa ahụ, ebe Apple achọghị ịmegharị ma ọlị.
Agbanyeghị, ihie nke ọla ọla na azụ a raara nye mpi ahụ agbanweela ntakịrị, ọla ndị ahụ na-egosipụtakwa agba ọzọ, na ngwụcha nke anyị nwere ike ịtụle matte, dị ka ndị azụ, oghere abụọ na-acha ọcha ma ọ bụ oji dabere na agba nke ngwaọrụ ahụ na-ewerekwa na agba a na-ewere matte. Ihu, ihe ọ bụla anyị họọrọ, ka yiri nke iPhone 5s. Banyere ọtụtụ agba, anyị na-ahụ mgbakwunye karịa obere mgbanwe na asụsụ, agba nke Apple mere ụdị ejiji ruru sentimita anọ, anyị na-ekwu maka Rose gold, nke a gold / pink bụ nnọọ pụtara ìhè n'etiti ndị whitish-aj u nke iPhone Ghaat, Bilie na Ohere Spray, Agba Ọcha na Champagne Gold. Na mbu ile anya nke Rose Gold ga-abụ otu n’ime ihe ole na ole amata dịka iPhone SE.
Agbanyeghị, ụda pink na-eme ka anyị nwee ihe mgbagwoju anya na ọla na plastik, dabere na ọnọdụ, ebe ọ bụ na ha emeela ihe mgbu dị ukwuu ịgụnye ụfọdụ ụdị ụda nwere ike inye ihe mmetụta plastik. Otú ọ dị, mmetụ ahụ ka dị otu dị ka onye bu ya ụzọ, nchikota aluminom na iko nke kwekọrọ n'ụzọ zuru oke, yana ọnụ ọgụ ike, nke, ọ bụ ezie na ọ bụghị nke kachasị ergonomic, enweghị nsogbu n'ihi "obere" nke ngwaọrụ a chọrọ.
Anụ ọhịa wolf na-eyi akwa atụrụ, ihe na-egosi pointer
Apple chọrọ imechi obi abụọ bilitere tupu ngwaọrụ ahụ, na uche onye ọ bụla bụ iPhone 5c, nke ahụ na-ekwu okwu na-efu ndị isi nchịkwa ihe karịrị otu iwe. Ọ bụ ya mere o ji kpebie ịghara ime otu ihe ahụ ma gosi anyị ihe ngwaike kachasị ọhụrụ, nke kachasị ketara akụkụ nke iPhone 6s, nke a bụ ngalaba zuru ezu:
A9 processor na 64 Bit ije
2 GB nke ebe nchekwa LLDDR4 DRAM
M9 Onye nhazi
LTE Ọganihu na Bluetooth 4.2 njikọta
Oge mbu Touch ID
Dị ka anyị pụrụ ịhụ na ngwaike ngwaike, ọ na-enweghị ihe 3D Touch technology wepụtara na iPhone 6s, iji gbaghara onwe ya Apple zoro aka na okwu nha, agbanyeghị, mgbawa njikọta Intel ga-ekwe ka nnyefe ọsọ ọsọ ruo 300 Mbps. enweghi nsogbu iwebata ma ọ bụ imeghari ya. ihuenyo 4-inch nwere mkpebi nke1.136 site na 640 pikselụ, na pikselụ 326 kwa inch dịka otu ihe ahụ iPhone 5s.
Nchekwa bụ otu n'ime isi ihe na-akụda mmụọ, ntinye ntinye malitere site na 16 GB, enweghị ezi uche n'ihu igwefoto anyị na-ahụ dịka ọmụmaatụ. Nzọụkwụ ọzọ bụ na 64 GB, hapụ 32 GB na-enweghị ohere ịhọrọ oke nchekwa. Banyere batrị, 1.642 mAh Dabere na nyocha kachasị ọhụrụ, ha na-ekwupụta n'etiti 10 na 20 pasent n'elu ọnụ dị ka iPhone 6s na Samsung Galaxy S7.
Sọftụwia kachasị ọhụrụ, yana atụmatụ niile akwadoro
Nke ahụ dị mma, Apple etinyeghị ngwaike nke iPhone 6s naanị iji tinye mmachi n'usoro nke ike, maka nke a, o soro iPhone SE nke ndakọrịta na ozi niile na ọkwa ngwanrọ nke gụnyere ngwaọrụ ya kachasị elu. Ihe nchekwa 2GB nke RAM na-enye gị ohere ịme ihe ọhụrụ ndị a niile, nke mbụ bụ Ntaneti di, Foto dị iche iche nke Apple nke dị ndụ dị ka GIF na-akpali akpali ma na-esonyere ụda na-adabakwa na iPhone SE, ọ bụghị ihe atụ na iPhone 6, ngwaọrụ nke na-efu ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ narị abụọ euro karịa ma ka na-ere. Na Mkpọchi Retina Ọ bụ ihe nkedo na-acha ọkụ nke na-enye anyị ohere iwere "selfies" na ọnọdụ ọhụhụ dị ala yana nke etinyegoro na iPhone SE.
Otú ọ dị, ikekwe ihe kachasị mkpa iji tụlee bụ «Hey siri«, Ọrụ nke idobe Apple na-enyere onye enyemaka aka mgbe niile njikere zuru oke, obere ike co-processor M9 na-elekọta ọrụ a, nke na-anaghị emetụta oriri nke batrị iPhone ma ọlị ma na-enye anyị ohere ịnụ ụtọ. Na akụkụ eserese, RAM na nhazi nke ngwaọrụ ahụ na-enye anyị ohere ịnụ ụtọ ihe ngosi kachasị ọhụrụ na Unreal Engine tinyere igwe teknụzụ nke METAL nke mere ka sọftụwia ahụ buru ibu gbasara egwuregwu vidio na ikpo okwu iOS.
Igwefoto dị na elu nke kachasị mma
Enweela eketa igwefoto azụ site na iPhone 6s, na igwefoto iSight 12MP nwere pikselụ àjà ihe ọlimụ -ụ, tinyere ezigbo ụda ọkụ na-emebu na oghere nke 2,2. Igwefoto ọhụrụ Apple nwere ike ịdekọ vidiyo na mkpebi 4K na 30 FPS, Mkpebi 1080p na 30 ma ọ bụ 60 fps na 1080p nwayọ ngagharị na 120 Fps na mgbakwunye na 720p na 240 Fps.
N'aka nke ọzọ anyị na-ahụ igwefoto dị n'ihu, nke bụ isi ihe na-adịghị mma, ebe ụfọdụ ụdị na-elekwasị anya na selfies, o yiri ka Apple ọ na-enye ha ohere furu efu. Igwefoto FaceTime HD nwere 1,2 Mpx na oghere oghere ya bụ 2,4, na-agbachitere onwe ya, mana ọ dị anya site na igwefoto ndị ọzọ na ahịa. Na mgbakwunye, ọ na-ekwe nkwa ịdekọ vidiyo na 720p, ọ bụ ezie na ogo doro anya na ọ dị ala.
Ọdịnaya nke igbe, ahịa na nnweta
N'ime igbe ha achọghị ịmegharị ọhụrụ kemgbe Cupertino, anyị na-ahụ EarPods na igbe polycarbonate ha ga-eme ka anyị nwee ike ịchekwa ma bufee ekweisi ahụ n'ụzọ dị mfe. Chaja na-emegharị ka ọ bụrụ mpaghara ebe anyị mere ịzụta na eriri Lighting 1,2 mita. Dị ka ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwaahịa niile nke Apple, envelopu ntụziaka na-esonyere di na nwunye vinyl nwere akara ngosi akara na igodo iji mepee tankị NanoSIM.
Ihe iPhone SE bu dị na Spain kemgbe Eprel 6 gara agaAgbanyeghị, ugbu a, ngwaahịa ahụ juputara na usoro ezigara maka ọnwa Mee. Ka ọ dị ugbu a, ohere nke abụọ bụ ịga ụlọ ahịa Apple kacha nso ma lelee nnweta ya na saịtị. Companieslọ ọrụ ekwentị ga-eweghara ngwaahịa na ndị na-ere ere dịka RosselliMac na El Corte Inglés enweelarị oge ndoputa iji nweta nke gị.
iPhone Ghaat - 16 GB - 489
iPhone Ghaat - 64 GB - 589
iPhone SE Rose ọla edo
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nyocha » Nyochaa nke iPhone SE, sentimita anọ dị ike nke Apple